Xiaomi Knowledge App – Xiaomi Guide
Published January 7, 2018 by Thet Zaw Ko
ကျနော့်ရဲ့ blog ကို app တစ်ခုအနေနဲ့ဖုန်းထဲမှာ ထည့်သွင်းထားပြီး ဖတ်ရှုလိုပါက အောက်ပါ application လေးကို install လုပ်ထားပြီး ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာစာကိစ္စအတွက် အကုန်ဖတ်ရှုလို့ အဆင်ပြေပါတယ်။
Download Xiaomi Knowledge app
Myint thu han
ဆရာရေ ကနြော့ကို မှတျမိလားတော့ မသိ ဟိုတခါ mi max mi account lock ကလြို့ ဆရာ့ကို မေးဖူးပါတယျ အဲ့တုံးကတော့ ဆိုငျကို ပို့ လိုကျတာ miui 8 global stable rom နဲ့ ပွနျရပါတယျ ဆိုငျက တော့ update တငျလို့ ရတယျတော့ ပွောပါတယျ ခငျဗြ ကနြောျလညျး မတငျရဲတာနဲ့ အဲ့ရကျပိုငျးက မတငျဖွဈပါဘူး ဆိုငျ တခါသှား တသောငျးခှဲဆိုတော့ ဒါပမေဲ့ မနေ့ကတော့ miui9လေး သုံးခငြျလာတာနဲ့ 9.2 update ဆိုပီးတှေ့တော့ download ဆှဲ ပီး updater ကနေ တငျမိပါတယျ ဒါပမေဲ့ mi account က ဟိုးအရငျ ကဖြူးတဲ့ account နဲ့ lock ထပျကပြါတယျ ကနြောျလညျး ကြောငျးသားဆိုတော့ ဆိုငျပို့ဖို့ အဆငျမပွတောနဲ့ ဆရာ့ blog က နဲ့ you tube က ကွညျ့ဖူးတာနဲ့ ဖတျဖူးတာ နဲ့ bypass လုပျကွညျ့ပါတယျ mi account ကို lock ပွုတျသှားပါတယျ ခငျဗြ miui9လညျး သုံးလို့ ရပါပီ ဖုနျးပွနျရတော့ မွနျမာ font က မမှနျပါဘူး ခငျဗြ အဲ့တာ TTA miui 9.2+ application down ပီး font change တော့ reboot ကပြါတယျ reboot ပေးပီးတဲ့ နောကျ ဖုနျးက mi logo မှာတငျ ရပျနပေါတယျ ပွနျတကျမလာတော့ပါဘူး ကနြောျ နာရီဝကျလောကျ စောငျ့ကွညျ့ပမေဲ့ ပွနျတကျမလာပါဘူး အဲ့တာနဲ့ volume power နဲ့ ဖုနျးကို reset ခပြါတယျ reset ကနေ ပွနျတကျလာတော့ lock နောကျတခေါကျပွနျကနြတောနဲ့ ပွနျဖွညျရပါသေးတယျ lock ပွနျဖွညျပီး ပုံမှနျအတိုငျး ပွနျဖွဈတဲ့ နောကျ ကနြောျ ဖုနျးကို font change လို့ lock ကတြာလား reboot ခလြို့ ပွနျတကျမလာတာလား သိခငြျတာနဲ့ reboot ခကြွညျ့ပါတယျ logo မှာတငျ ရပျသှားပါတယျ ပွနျတကျမလာပါဘူး စောငျ့ကွညျ့ပါသေးတယျ အဲ့တာနဲ့ တတိယအကွိမျမွောကျ reset ခြ lock ထပျဖွညျလိုကျရပါတယျ ခုတော့ font လညျး မခြိနျးရဲလို့ မခြိနျးတော့ သလို reboot လညျး မခရြဲတော့ပါဘူး နောကျတခေါကျထပျလုပျနရေမှာ စိုးတာနဲ့ အဲ့တာ ဘာကွောငျ့ ပါလဲ မသိဘူးဆရာ bypass လုပျလိုကျတဲ့ ဖုနျးတိုငျးပဲလား သိခငြျပါတယျ ခငျဗြ ခုကနြောျလညျး စာရိုကျတော့ အဆငျပွပေမေဲ့ facebook မှာ ဆို comment တှေ ဖတျလို့မရပါဘူး ခငျဗြ မွနျမာစာက အဆငျမပွပေါဘူးခငျဗြ အဲ့တာ ဘယျလို ဖွရှေငျးရမလဲ သိခငြျပါတယျ ခငျဗြ စာလညျး တောျတောျ ရှညျနပေါပီ ကြေးဇူးလညျး တငျပါတယျ ဆရာခငျဗြ ကနြောျလညျး ပညာရ ဘာကွောငျ့မြားလညျး သိခငြျလို့ မေးကွညျ့တာပါခငျဗြ ကြေးဇူးတငျပါတယျ
ဖွဈနိုငျမယျဆိုရငျ font error ဖွရှေငျးရမဲ့ နညျးလမျးလေးလဲ သိခငြျလို့ပါခငျဗြ ကြေးဇူးတငျပါတယျ ဆရာခငျဗြ
Your application can not install to my phone and tablet.
Try again. That’s some kind of simple web browser. Not complicated app.